Myat Shu - အမှတ်တရ
You are here : Myat Shu » Archives for အမှတ်တရ
Published By Myat Shu On Monday, April 29th 2013. Under မျက်ရှု, အမှတ်တရ
www.m-mediagroup.com ထိုစဉ်က ၀ါတွင်းအချိန်ဖြစ်သောကြောင့် ကျွန်မတို့ မြို့မကျောင်းသည် ၀ါပအချိန် စနေ၊ တနင်္ဂနွေနှင့် ဥပုသ်နေ့တါင် နေ့ပြောင်း၍ ကျောင်းပိတ်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် စနေနေ့က ကျွန်မတို့ ကျောင်းပိတ်ကြပါသည်။ အခါတိုင်း ကျောင်းအားသော စနေနေ့များ၌ အစ်ကိုသည် ဖေဖေနှင့်အတူ အတွင်းဝန်များရုံးသို့ လိုက်ပါနေကျဖြစ်သော်လည်း ယခုတော့ ကျောင်းတက်နေသည်ဖြစ်သောကြောင့် မလိုက်ပါနိုင်တော့။ အစ်ကို့အတွက် ကံကောင်း၍ပေလောဟု မှတ်ထင်ရ၏။ ထိုနေ့က မိုးမှာ တစိမ့်စိမ့်သွန်းဖြိုးလျက်ရှိရာတွင် ခါတိုင်းလို ကျောင်းစာများ၌ပင် စိတ်ဝင်စား၍ မရနိုင်အောင် ငြီးငွေ့နေမိသည်ဟု ထင်မိပါ၏။ အဘယ့်ကြောင့်ဟု မဆိုနိုင်သော်လည်း ထိုနေ့သည် နေရထိုင်ရသည်မှာ အခါတိုင်းလိုမဟုတ်၊ ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်မရှိ၊ တစ်မျိုးပင် ဖြစ်လို့နေသည်။ သို့သော် နေ့လယ် ၁ နာရီတွင် ကျောင်းအုပ်ကြီး ဦးဘလွင်က ... Continue Reading
Published By Myat Shu On Sunday, April 14th 2013. Under မျက်ရှု, အမှတ်တရ
Picture Credit to MoeMaKha Media အဖေ့အကြောင်း သမီးတစ်ယောက်အနေနဲ့ ခံစားရတာလေးတွေ နည်းနည်းပြောပြပါလို့ ဦး(ဦးနေ၀င်းမြင့်) က ပြောလို့ အဖေနဲ့ နောက်ဆုံးအချိန်ထိ အတူနေခဲ့တဲ့ သမီးတစ်ယောက်အနေနဲ့ ကြိုးစားပြီး ရေးလိုက်ပါတယ်။ အခုလိုအချိန်မှာ အဖေချစ်တဲ့ မြန်မာပြည်မှာ အဖေ့အောက်မေ့သတိရပွဲတွေ လုပ်ကြတာ၊ အဖေ့ကို လွမ်းဆွတ်သတိရတဲ့ စာတွေရေးကြ၊ စာအုပ်တွေ ထုတ်ကြတာ သိရ ကြားရတာ ၀မ်းနည်း၊ ၀မ်းသာ ဖြစ်မိသလို၊ အခုလို ချစ်ခင်အောက်မေ့ကြတဲ့ မိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းများကိုလည်း ကျေးဇူးတင်မိပါတယ်။ အရင်က အဖေ့နာမည်တစ်လုံး မဂ္ဂဇင်းစာမျက်နှာမှာပါဖို့ ဆိုရင် “ဧည့်သည်ကြီး” လိုတစ်မျိုး၊ “ဂျမ်း” လို့တစ်ဖုံ၊ “ဖန်မီးအိမ်ရှင်” လို့တစ်နည်း စကားထာ ၀ှက်သလို လျှို့လျှို့ဝှက်ဝှက် ရေးစရာမလိုပဲ လွတ်လွတ်လပ်လပ် ... Continue Reading